Urolithin A kachasị mma (1143-70-0) - Emeputa & ụlọ ọrụ
Cofttek bụ Urolithin A kacha emepụta ntụ ntụ na China. Ụlọ ọrụ anyị nwere sistemụ njikwa mmepụta zuru oke (ISO9001 & ISO14001), yana ikike mmepụta kwa ọnwa nke 400kg.
Urolithin A ntụ ntụ nkọwa
aha: Urolithin A.
Chemical aha: 3,8-Dihydroxybenzo [c] chromen-6-one
Usoro Chemical: C13H8O4
Ọbara arọ: 228.2
agba: White na-acha ọcha ọcha ntụ ntụ
InChi Igodo: RIUPLDUFZCXCHM-UHFFFAOYSA-N
Koodu SMILES: O=C1C2=CC(O)=CC=C2C3=C(O1)C=C(O)C=C3
ọrụ: Urolithin A, gut-microbial metabolite nke ellagic acid, nwere ọgwụ mgbochi, antiproliferative na akụrụngwa antioxidant. Urolithin A na - akpata Automoragy na apoptosis, na - egbochi mmepe okirikiri ma na - egbochi njikọ nke DNA.
ngwa: Urolithin A bụ metabolite nke ellagitannin; Ndị na-ahụ maka ọgwụ
Solubility: Nsogbu na DMSO (3 mg / mL).
Nchekwa Nche: Akọrọ, ọchịchịrị na 0 - 4 C maka obere oge (ụbọchị ruo izu) ma ọ bụ -20 C maka ogologo oge (ọnwa ruo afọ).
Urolithin A. NMR ụdịdị dị iche iche
Urolithin A uru
(1) Nwere ike ịgbatị oge ndụ
Urolithin A na - akpata mitophagy site na iwezuga mitochondria mebiri emebi. Nke a na - asuresụrị nrụgharị nke mitochondria maka ịrụ ezigbo ọrụ. Mitochondria na-emebi ọtụtụ oge yana afọ yana n'ihi nrụgide. Ridchụpụ mitochondria mebiri emebi na-ekere òkè n'ịgbatịkwu afọ ndụ gị.
Na nyocha nke ikpuru, urolithin Ihe ndozi nke enyere na 50 µM site na akwa akwa ruo ọnwụ hụrụ ka ọ na-agbatị ndụ ha site na 45.4%.
N'ọmụmụ ihe ọzọ emere na 2019 n'iji fibroblasts senescent mmadụ, urolithin A mgbakwunye achọtara iji gosipụta ikike ịka nká. Ọ nwere ike ịbawanye okwu 1 nke collagen ma belata ngosipụta nke matriks metalloproteinase 1.
Obere ihe omumu mmadu gosiputara na UA nwere ike meziwanye oru mitochondrial na ahuike ndi mmadu n’egwuregwu mgbe ejiri onu me ya na 500-1000mg rue oge izu anọ.
(2) Nyere aka igbochi kansa prostate
Urolithins na njiri mara ha, ellagitannins, nwere ihe eji egbochi ọrịa kansa. Ha nwere ike igbochi mgbasa mkpụrụ ndụ kansa site na njide sel na ịbanye apoptosis. Apoptosis na-ezo aka na ọnwụ mkpụrụ ndụ nke ahụ mmadụ kpochapụrụ mkpụrụ ndụ cancer nwere na mkpụrụ ndụ ndị ọzọ nwere ọrịa.
Na nyocha nke ụmụ oke ji mkpụrụ ndụ kansa, ellagitannins metabolites (Urolithin A) chọpụtara na igbochi uto nke ọrịa kansa. Ọmụmụ ihe ahụ kọwakwara mkpara nke metabolites dị na gland prostate, muscle na anụ ahụ.
(3) Mmuta mmuta
Urolithin A nwere ike ichebe neurons site na ọnwụ ma nwee ike ịkpalite neurogenesis site na akara ngosi mgbochi mkpali.
N'ime ihe omumu banyere oke okike, a chọpụtara urolithin A ka oke ghara inwe nchekwube ma chekwaa neurons site na apoptosis. Nke a na-egosi na enwere ike iji UA na-agwọ ọrịa Alzheimer (AD).
(4) Imegide oke ibu
Nchọpụta e mere gosiri na ellagitannins na-enwe ike igbochi nnụchi egbugbere ọnụ yana ihe nrịbama ọrịa adipogenic dịka protein uto nke uto 2 yana protein na-ejikọ aka site na njide sel.
Achọpụtala Urolithin A ka ọ rụọ ọrụ iji mee ka insulin mara mma si otú a gbochie mmepe nke oke ibu.
Na nyocha nke ụmụ oke na oke ibu, urolithin A hụrụ mgbakwunye iji gbochie oke ibu oke ibu nri na oke mmezi nke ụmụ oke. Ọmụmụ ihe ahụ gosiri na ọgwụgwọ nke UA mụbara mmefu ike n'ihi ya ọ nwere oke ahụ.